Dilka labadii gabdhood ee Somali-Canadianka oo lagu soo eedeeyay wiil la dhashay gabdhahaas (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dilka labadii gabdhood ee Somali-Canadianka oo lagu soo eedeeyay wiil la dhashay gabdhahaas (SAWIRO)
Waxaa maalintii shalay magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada lagu aasay labo gabdhood oo walaalo ah, kuwaasi oo habeenkii Jimcihii ahayd lagu dilay gurigooda oo ku yaala magaaladaas.
Gabdhahaasi la dilay oo lagu kala magacaabi jiray Nasiiba C/raxmaan Axmed Nuur oo 29-jir ahayd iyo Asma C/raxmaan Axmed Nuur oo 32 jir ahayd, ayaa la sheegay in maalintii Jimcihii lagu dilay Tooreey, xilli ay ku sugnaayeen gurigooda.
Ciidanka booliska dalka Canada ayaa bilaabay baaritaanka dadkii ka dambeeyey dilkaasi, waxayna qabteen ilaa 2 qof oo lala xiriirinayo dilka loo geystay gabdhahaasi.
Warbaahinta dalka Canada ayaa qortay inay booliska qabteen wiil la dhashay gabdhahaasi oo lagu magacaabo Muscab C/raxmaan Ahmed Nuur oo 29-jir, kaasi oo lala xiriirinayo dilka gabdhaha ay walaalaha ahaayeen.
Wuxuu eedeysanaha diiday inuu kasoo baxo xabsiga uu ku xiran yahay iyo inuu ka hor muuqdo maxkmaadda, balse waxay xeer-beegtida kusoo oogeen dembiga dilka ee heerarka koowaad iyo labaad (The first and second-degree murder).
Waxaa eedeysanaha lagu qabtay meel ku dhow guriga qoyskiisa, wax yar kadib dilka, waxaana markaasi kadib loo gudbiyey isbitaal dhaawacyo fudud oo soo gaaray awgiis.
Dhinaca kale, wararka qaar ayaa sheegaya in eedeysanaha Muscab C/raxmaan Ahmed Nuur uu qabo cudurka dhimirka, sida ay sheegeen qaar ka mid ah saaxibadiisa iyo dadka ku dhow qoyskiisa.